Covid-19 ကြောင့် ဆောက်လုပ်ရေးကဏ္ဍအပေါ်သက်ရောက်မှုများ စာတမ်း ပြုစုမည် | Myanmar Business Today
HomeBusinessCovid-19 ကြောင့် ဆောက်လုပ်ရေးကဏ္ဍအပေါ်သက်ရောက်မှုများ စာတမ်း ပြုစုမည်
A labourer works ataconstruction site in Yangon January 24, 2012. REUTERS/Soe Zeya Tun
English Tex Below
Covid-19 ကြောင့် ဆောက်လုပ်ရေးကဏ္ဍအပေါ်သက်ရောက်မှုများ ဆန်းစစ်ခြင်း စာတမ်းကို ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ဦးဆောင်ရေးဆွဲသွားမည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပါ စာတမ်းရေးသားရန်အတွက် ဆောက်လုပ်ရေးကဏ္ဍတွင် လုပ်ကိုင်နေသူထံမှ လိုအပ်သည့်အကြံပြုချက်များကို ဖိတ်ခေါ်ထားကြောင်း သိရသည်။
ယင်းစာတမ်းရေးသားရန် ဆောက်လုပ်ရေးကဏ္ဍတွင် လုပ်ကိုင်နေသည့် အင်ဂျင်နီယာများ၊ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်သားများ၊ ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီများ၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများအား ထုတ်ပိုးရောင်းချသူ များ ၊ ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် ဆက်စပ်ဘဏ်များနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးကဏ္ဍနှင့် သက်ဆိုင်သူများသည့် ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ info@construction.gov.mm သို့ အကြံပေးချက်များပေးပို့ ရန်ဖိတ်ခေါ်ထားသည်။
ထိုစာတမ်းတွင် သွင်းအားစုပြတ်တောက်ခြင်း၊ ပြည်တွင်း ပြည်ပမှ ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများ တင်သွင်းမှုအခြေအနေ၊ ဈေးနှုန်အတက်အကျနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်သားရရှိမှုနှင့် စုစည်းနိုင်မှု တို့ကို ဆွေးနွေးအကြံပေးရမည် ဖြစ်သည်။
ယင်းပြင် ဝယ်လိုအားနှင့် ပတ်သက်၍ အိမ်ခြံမြေ တိုက်ခန်းအရောင်းအဝယ်၊ အိမ်ရာစီမံကိန်းများအနေအထား၊ ရုံးနှင့် အဆောက်အဦးများ၊ အစိုးရတင်ဒါနှင့် အကျိုးတူလုပ်ငန်းများ၊ နိုင်ငံတကာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုစီမံကိန်းများနှင့် လမ်းတံတားအခြေအနေများကို ဆွေးနွေးအကြံပြုရမည်ဖြစ်သည်။
အစိုးရပံ့ပိုးမှုနှင့် ဝယ်ယူသူများအတွက် အိမ်ရာချေးငွေနှင့် ကွန်ဒိုဥပဒေနှင့် အခြားဥပဒေဖြေလျှော့မှုများကို ထည့်သွင်းအကြံပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ သိရသည်။
ထိုပြင် ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီကြီးများအတွက် ဘဏ္ဍရေးအကြပ်အတည်း လက်ရှိငွေစီးဆင်းမှု အခြေအနေ အား ၁ လမှ ၆ လ အထိ ၊စီမံကိန်းဖြင့်လုပ်ဆောင်သည့်လုပ်ငန်းများအတွက် ငွေသွင်းနိုင်မှု ၊ ဘဏ်များမှ ငွေထောက်ပံ့နိုင်မှုနှင့် စီမံခန့်ခွဲရေးစိန်ခေါ်မှုများ၊ ဘဏ်များနှင့် ယခင်က ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည့် ချေးငွေကိစ္စများ၊ ရက်လွန်ချေးငွေကိစ္စများ၊အတိုးနှုန်းနှင့် အခြားကိစ္စများကို ဆွေးနွေးပြီး အကြံပြုစာများပေးပို့ပေးရန် ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ထားသည်။
ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်သမားများ၏ စားဝတ်နေရေးနှင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအတွက် ဘေးကင်းလုံခြုံသည့် လုပ်ငန်းခွင်ဖြစ်ရေး၊ လုပ်ငန်းခွင်တွင်း covid-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးဆောင်ရွက်မှုနှင့် အလုပ်သမားများ၏ ကျွမ်းကျင်မှုစံနှုန်းများ မြှင့်တင်ရေးနှင့် အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်နေချိန်တွင် သင်တန်းများပေးရေး တို့ကိုပါထည့်သွင်းအကြံပေးရန် ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ထားသည်။
အဆိုပါ အကြံပေးချက်များတွင် ကုစားရေးအဆင့်များဖြစ်သည့် ချေးငွေဖြင့် ကုစားရေး၊ လုပ်ငန်းသစ်များဖော်ဆောင်ပေးခြင်းနှင့် အခွန်လျှော့ချမှုအစီအစဉ်တို့ကို ထည့်သွင်းရေးသားရေးရန် ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ထားသည်။
ယင်းသို့ အကြံပြုချက်များကို ပြန်လည်စုစည်းပြီး တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အလိုက် Video Conferencing များပြုလုပ်၍ အပြီးသတ်အစီရင်ခံစာကို ရေးသားသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ သိရသည်။
The Ministry of Construction has invited inputs and suggestions from stakeholders in the construction industry as it is working onapaper on the impact of COVID-19 outbreak on the construction industry.
All the stakeholders in the industry including engineers, construction workers, construction companies, construction materials suppliers, and construction banks can send suggestion to info@construction.gov.mm.
The paper will cover both supplies such as input shortage in the industry, supply condition, availability of construction workers, and price fluctuations and demands such as real estate rental and sates as well as government’s projects. In addition to that, it will also tap rules and regulations to ease.
Previous articleAustralia treasurer tested for coronavirus after coughing bout in parliament
Next articleနည်းပညာဆိုင်ရာ အဖြေများကို ရှာဖွေနိုင်ရန် ဒို့ဖန်တီး Platform ကို စတင်မိတ်ဆက်